माल्टा लैजान्छु भन्दै युवाहरुलाई ठगी सर्मिलाले उठाइन लाखौं लाख रकम – Namaste Host
March 14, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on माल्टा लैजान्छु भन्दै युवाहरुलाई ठगी सर्मिलाले उठाइन लाखौं लाख रकम
अमेरिकामा आजको रात ११ घण्टाको हुनेछ । किनभने डेलाइट सेभिङ टाइम आज राती सुरु हुने भएको छ । जस अन्तरगत आज राती १ बजेर ५९ मिनेट गइसकेपछि २ बज्नुपर्नेमा ३ बज्नेछ ।बेलुका १० बजेदेखि ६ बजेसम्म सुत्ने तालिका बनाएकाहरुले ८ घण्टाको साटो थप ७ घण्टा सुत्न पाउनेछन् ।
रातीमा काम गर्नेहरुले भने ८ घण्टाको साटो ७ घण्टा काम गर्नुपर्नेछ ।१ घण्टा समय अगाडि जाने भएकाले माइक्रोवेभ, हातेघडी, भित्तेघडी, ओभन जस्ता चिजहरुमा घडी एकघण्टा फरवार्ड गर्नुपर्नेछ भने मोबाइल, ल्यापटप जस्ता इन्टरनेट कनेक्ट हुने डिभाइसहरुमा घडी आफै १ घण्टा फरवार्ड हुनेछ ।
थप समाचार :अहिले अमेरिका र नेपालको भिन्नताबारे सामाजिक सञ्जालमा केही टुक्काहरू भाइरल हुने क्रममा छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले अमेरिका र नेपालका २५ फरक भिन्नताहरू सङ्कलन गरेर राखेका छौँ ।१. अमेरिकनहरू भोलि भोकै हुन किन नपरोस् आज टन्न खान्छन् ।हामी नेपालीको संस्कार भोलि भोकै हुनुपर्ला भन्ने चि’न्ताले वा धार्मिक मान्यता बनाई आज भो’कै बस्छौ ।
२.अमेरिकन खुल्ला ठाउँमा खाना खान्छन् अनि गोप्य ठाउँमा दिशा गर्छन् । नेपाली गोप्य भान्सा कोठामा खाना खान्छौ अनि खुल्ला चौ’र, बन पाखामा दिशा गर्छौ ।३ अमेरिकन पहिले घर किनेर त्यसैमा बसी क्रेडिटमा किनेको घरको पैसा जिन्दगीभर तिर्दै जान्छन् । नेपाली जिन्दगीभर भाडामा बसी बचाएको कमाएको पैसाले बुढेसकालमा घर किनेर, बनाएर छोराछोरीलाई छोडी म’र्छौ ।
४.अमेरिकन दूध चिसो पिउँछन् पानी आइस राखेर पिउँछन् । हामी दूध तताएर पानी उमालेर पिउँछौ ।५.अमेरिकनहरू अलि बढी पैसा बचत भए दिमाग फ्रेस बनाउन मनोरञ्जनमा खर्च गर्छन् । हामी नेपाली केही बढी पैसा बचत भए अर्को धेरै पैसा चाहिने व्यवहार आँ’टेर बो’झ (टे’न्सन) बढाउँछौ ।
६. अमेरिकन महिला बच्चा अगाडी भागमा छातीमा टाँ’सेर बोक्छन् हामी पछाडि पि’ठ्यूँमा बो’क्छौ ।७.अमेरिकन हातले फ्याँ’केर खेल्नेलाई फुटबल भन्छन् हामी खुट्टाले फ्याँ’केर खेल्नेलाई फुटबल भन्छौ ।८.अमेरिकन ग’रिबहरू मोटा हुन्छन् खास गरी जं’कफुड र सस्ता खाना खाएर । अनि धनीहरू स्वास्थ्य खाना र ब्या यम’ले स्ली’म (पा’तला) हुन्छन् । हामी काहा गरिबहरू खान नपाएर बढी परिश्रमले पातला हुन्छन् धनी धेरै खाएर मोटा हुन्छन् ।
९.अमेरिकन आफ्नो प्रेमिकालाई प्रेम गरेर विवाह गर्छन् । हामी विवाह गरेर अझ बच्चा भएपछि श्रीमतीलाई प्रेम गर्छौ ।१०.अमेरिकन प्रचलन घर, व्यावसायिक स्टोर, रेस्टुरेन्ट, कार्यालय बेलुका सफा गर्छन् हामीकहाँ बिहान सफा गर्ने प्र’चलन छ ।११. अमेरिकन मिति लेख्दा पहिले महिना अनि गते र साल लेख्छन् । हामी पहिले साल महिना र गते लेख्छौ । अक्टोबर ३० २०१७ , २०७४ कार्तिक ७
१२. अमेरिकन जन्मँदा नै ना’मी हुन्छन् हामी बे’नामी । कसरी भने अमेरिकन पेटमा बच्चा भएपछि बच्चाको नाम दिन्छन् र जन्मँदा सोही नामको ब’र्थ स’र्टिफिकेट बन्छ । हामीकहाँ जन्मेको ११ दिनमा पण्डित वा बाबु आमाले नाम दिएपछि ना’मी हुन्छौ ।१३.अमेरिकन पु’लिस पसलमा समान किन्दा, रेस्टुरेन्ट जाँदा, ट्याक्सी चढ्दा टिप्स पनि दिन्छन् । हामीकहाँका पु’लिस यी ठाउँबाट हप्ता नै लिन्छ ।
१४.अमेरिकन धनीले कर ति’र्छन् कम आए हुने गरिबले ट्या’क्स फिर्ता बाट पैसा पाउँछन् । नेपालमा धनीले धन र श’क्तिले कर तिर्दैनन् र थोरै तिर्छन् गरिब साना व्यवसायी बढी कर ति’रिरहेका हुन्छन् ।१५ अमेरिकन चलन पैसाको नोट ठुलो माथि पारी आसनमा सानो नोट राख्छन् । हाम्रोमा आसनमा ठुलो नोट माथि सानो हुँदै जान्छ ।
१६. अमेरिकन प्याकेटको खाना अर्थात् अर्कैले तयार गरेको खाना खान मन पराउँछन् । हामी आफैले बनाएको अझ आफूले चिनेजानेकाले बनाएको मात्र खाना खान मन पराउँछौ ।१७.अमेरिकामा कमाइको हिसाबमा खानेकुराको तुलनामा बसाइ बस्ने ठाउँ होटेल, अपार्टमेन्ट, घर, कोठा महँगो हुन्छ । नेपालमा बस्ने सस्तो होला खानेकुरा धेरै महँगो हुन्छ ।
१८.अमेरिकामा प्राय पुरुष महिला देखी ड’राउँछन् अनि घर व्य’वहार उनैले स’म्हाल्छन् । नेपालमा महिला पुरुष देखी ड’राउँछन् र घर व्यवहार पुरुष नै स’म्हाल्छन् ।१९.अमेरिकन महिला विवाहको दिन नयाँ ठाउँ नयाँ मान्छे नयाँ परिवेशको अ’नुभव गर्न जादैछु भनी खुसी हुन्छन् । हामीकहाँ बेहुली विवाहको दिन माइती, बाबुआमा छा’डेर पराइसँग जादैछु ठान्दै रुन्छन् ।
२०.अमेरिकन धेरै धनी भए सुख शा’न्ति खोज्न गाउँ वा एकान्त तिर पस्छन् । हामी कहाँ धेरै धनी भए सुख शा’न्ति खोज्न सहर भि’डभाड तिर जान्छन् ।२१.अमेरिकन जोडी जो विवाह गरेर धेरै वर्ष सँगै बसेका हुन्छन् उनीहरूलाई देखेर अरू मान्छे अ’चम्मित हुन्छन् । नेपालमा विवाह गरेर छिट्टै अ’लग्गिएका जोडी प्रति अचम्मित हुन्छन् ।
२२.अमेरिकन महिला घुँ’डा साँ’प्रा देखाएर छोटो लुगा लगाउँछन् तर पुरुषले घुँडा देखाएको त्यति राम्रो मानिँदैन । नेपालमा पुरुष घुँडा देखाएर छोटो क’ट्टु लगाउँछन् महिलाले घुँडा देखाएको राम्रो मानिँदैन ।२२ं. अमेरिकन न’चिनेको मान्छे होस वा रि’स उठेका मान्छे नै किन नहोस् फि’सिक्क हाँ’सेर बोल्छन् । हामीकहाँ नचिनेको वा रि’स उठेकोसँग हाँस्ने बोल्ने त कुरा परै जावोस् उ हिँडेको बाटो समेत हिँड्दैनन् ।
२३. अमेरिकन टि’नएजर का’टेपछि पनि कुनै केटा साथी वा केटी साथी छैन भने अभिभावक उसको कुनै शा’रीरिक कमजोरी त छैन भनी स’जग हुन थाल्छन् । नेपालमा टि’नएज का’टेपछि कुनै केटा साथी वा केटी साथी त छैन भनी अ’भिभावक नै श’ङ्काले स’जग भैरहन्छन ।२४.अमेरिकाको सहरी क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता पैदल यात्रुलाई दिई कम गतिका सवारी हुँदै ती’व्र गतिका सवारी पछाडि जान्छन् ।
नेपालमा पहिले ती’व्र गतिको गाडीले पा’स गरेपछि कम गतिको सवारी हुँदै पै’दल यात्रीको पा’लो अ’न्तिममा आउँछ ।२५. अमेरिकन सुन्दर युवतीलाई न’चिनेको मान्छेले पनि वाह! कति से’क्सी(सुन्दर) होस भनेमा थ्याङ्ग.क्यू भनी मु’स्कुराउँछन् । हामीकहाँ अनजान सुन्दरीलाई कति सुन्दर र’हिछौ भनेमा मात्र पनि च’प्पल उ’ठाएर ब’जाइदिन्छन् ।